Ugu yaraan 176 qof oo Falastiin ah oo ku dhaawacmey intii ay ... | Universal Somali TV
Ugu yaraan 176 qof oo Falastiin ah oo ku dhaawacmey intii ay socdeen iskudhacyo ka dhan ah go'aanka madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ee Qudus.
Ugu yaraan 176 qof oo Falastiin ah ayaa ku dhaawacmey rasaasta nool oo ay adeegsanayaan ciidamada Israaiil intii ay socdeen iskudhacyo ka dhan ah go'aanka madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ugu aqoonsaday al-Qudus caasimadda Israel, sida ay sheegeen saraakiisha Falastiiniyiinta.
Bishii December 6-deedii, Trump ayaa ku dhawaaqay go'aankiisa aqoonsiga al-Qudus oo ah caasimadda Israel, wuxuuna safaarada Mareykanka ee Israel ee magaalada Tel Aviv ku amray in loo raro magaalada barakaysan.
Go'aanka madaxweynaha Maraykanka ayaa sababay cadho guud ahaan caalamka iyo wadamada muslimiinta iyo welwelka ka dhaxeeya xulafada yurub ee Washington iyo sidoo kale Ruushka. Si kastaba ha ahaatee, Israel ayaa soo dhaweysay go'aanka.
Maalintii Jimcaha, boqollaal reer Falastiin ayaa isku dhacen ciidamada Israel ee Gaza Strip iyo Daanta galbeed ee la haysto iyagoo ka soo horjeeda go'aanka Trump.
Boqolaal reer Falastiin ah oo ku sugan Gaza ayaa weeraray xudduudaha dhulka la haysto waxayna dhagxaan ku tuureen askarta Israaiil oo ugu jawaabay rasaaseeyn iyo gaaska si ay u kala eryaan.
Dibadbaxayaasha qaarkood waxay dhagaxyo ku tuureen oo ay taayaro ku gubeen dhowr magaalo oo ku yaal Daanta Galbeed.
Wasaaradda Caafimaadka ee Falastiiniyiinta ayaa sheegtay in guud ahaan 176 qof oo dibadbaxayaal ah ay ku dhaawacmeen intii lagu jiray dagaalka Jimcihii ee ka dhacay Gaza Strip iyo Daanta Galbeed.
Guud ahaan 17 Falastiin ah ayaa la dilay tan iyo markii Trump uu ku dhawaaqay go'aankiisa ku saabsan al-Qudus.
Kan-xigaKenya: Weerar lagu tuhunsanyahay al-S...
Kan-horeTaliyaha ciidamada Pakistan oo sheega...
40,588,027 unique visits